महिला कर्मचारीसँग प्रेमसम्बन्ध राखेको भन्दै स्टीभ इस्टरब्रुकलाई जागिरबाट हटाइयो Canada Nepal
महिला कर्मचारीसँग प्रेमसम्बन्ध राखेको भन्दै स्टीभ इस्टरब्रुकलाई जागिरबाट हटाइयो
कार्तिक १८ २०७६
म्याक्डोनल्ड्सले एक कर्मचारीसँग प्रेमसम्बन्ध राखेको पाइएपछि आफ्ना प्रमुख कार्यकारी स्टीभ इस्टरब्रुकलाई जागिरबाट हटाएको छ।अमेरिकी प्रसिद्ध रेस्टुराँको सञ्जालले दुई जनाबीचको सम्बन्ध सहमतिमा आधारित भए पनि इस्टरब्रुकले 'कम्पनीको नीति उल्लङ्घन गरेका' र 'कमजोर निर्णय क्षमता देखाएका' बताएको छ।
कर्मचारीहरूलाई पठाएको एउटा इमेलमा ब्रिटिश नागरिक इस्टरब्रुकले ती महिला कर्मचारीसँग आफ्नो प्रेमसम्बन्ध रहेको स्वीकार्दै आफूले गल्ती गरेको बताएका छन्।"कम्पनीको मूल्यलाई ध्यानमा राख्दै मैले अब जागिर छोड्ने विषयमा बोर्डसँग सहमति जनाएको छु," उनले भनेका छन्।
भुक्तानी - श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरिसकेका ५२ वर्षीय इस्टरब्रुकले अहिलेको पद सम्हाल्नुअघि पहिलो पटक सन् १९९३ मा लन्डनमा म्याक्डोनल्ड्सको व्यवस्थापकका रूपमा काम गरेका थिए।सन् २०११ मा उनले म्याक्डोनल्ड्स छोडेर पिज्जा एक्स्प्रेसका र त्यसपछि सन् २०१३ मा म्याकडोनल्ड्समा फेरि फर्कनुअघि खानासम्बन्धी एशियाली सञ्जाल वागामामाका प्रमुख भए।सन् २०१५ मा उनी म्याक्डोनल्ड्सका प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त भए।
म्याक्डोनल्ड्सका मेन्यू तथा रेस्टुराँमार्फत्‌ अझ राम्रा कुरा पस्केर कम्पनीलाई अगाडि बढाएको श्रेय इस्टरब्रुकलाई जान्छ।उनको कार्यकालमा कम्पनीको शेअर मूल्य दुई गुणाभन्दा बढीले बढ्यो।इस्टरब्रुकको नेतृत्वमा म्याक्डोनल्ड्सले आफ्नो डेलिभरी सेवालाई विस्तार गर्नुका साथै मोबाइलमार्फत्‌ गरिने भुक्तानीमा अझ बढी जोड दियो।शुक्रवार एउटा समीक्षापछि म्याक्डोनल्ड्सको बोर्ड बैठकले इस्टरब्रुकको बहिर्गमनबारे मतदान गरेको थियो।म्याक्डोनल्ड्सका अध्यक्ष र बोर्डका सदस्य पदबाट पनि उनले राजीनामा दिएका छन्।
वर्जित - सो कम्पनीको नीतिले व्यवस्थापकहरूलाई आफूसँग तल्लो तहका कर्मचारीसँगको प्रेम सम्बन्धलाई वर्जित गरेको छ।पदबाट हटाइएपछि उनलाई दिइने रकम लगायतबारे विस्तृत विवरण सोमवार सार्वजनिक गरिनेछ, जसलाई धेरैले नजिकबाट नियाल्नेछन्।कर्मचारीलाई दिने तलबलाई लिएर म्याक्डोनल्ड्सले आलोचना खेप्दै आएको छ र सन् २०१८ मा लिएको एक करोड ५९ लाख डलर बराबरको तलब-सुविधालाई लिएर इस्टरब्रुकले छानबिनको सामना गर्नुपरेको थियो।
त्यो मध्यम तहका कर्मचारीको तलबभन्दा २,१२४ गुणाले बढी हो। मध्यम तहका कर्मचारीले ७,४७३ अमेरिकी डलर पाउँछन्।इस्टरब्रुकको ठाउँमा तत्काल लागु हुने गरी क्रिश केम्पजिन्स्की आउनेछन्।एउटा वक्तव्यमार्फत्‌ केम्पजिन्स्कीले इस्टरब्रुकलाई धन्यवाद दिँदै भनेका छन्, "स्टिभले मलाई म्याक्डोनल्ड्समा ल्याए। उनी धैर्यवान्‌ र सहयोगी गुरु थिए।"गत वर्ष इन्टेलका प्रमुखलाई कम्पनीको नीतिविपरीत कर्मचारीसँग सम्बन्ध राखेको पदबाट हटाइएको थियो। उनी सन् २०१३ देखि प्रमुख पदमा थिए।बिबिसीबाट
कार्तिक १८, २०७६ सोमवार ०५:३४:०० बजे : प्रकाशित
बीबीसी। सन्देश आदानप्रदान तथा भुक्तानीका लागि प्रयोग गरिने चिनियाँ एप वीच्याटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी सरकारको प्रयासलाई एक न्यायाधीशले विफल पारिदिएकी छन्।
अमेरिकी म्याजिस्ट्रेट न्यायाधीश लरेल बीलरले उक्त प्रतिबन्धले वाक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाएको संविधानको पहिलो संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरूबारे गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको बताएकी छन्। अमेरिकाको वाणिज्य मन्त्रालयले आइतवाबाट त्यहाँको एप स्टोरमा वीच्याटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो।
ट्रम्प प्रशासनले उक्त एपले आफ्नो देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पारेको आरोप लगाएको छ। वीच्याटले प्रयोगकर्ताहरूको डेटा चिनियाँ सरकारलाई उपलब्ध गराउन उसको भनाइ छ। तर चीन र वीच्याट दुवैले उक्त दाबीको खण्डन गरेका छन्। व‍ीच्याट बनाउने कम्पनी टेन्सेन्टले यसअघि अमेरिकी प्रतिबन्धलाई "दुर्भाग्यपूर्ण" भनेको थियो।
प्रतिबन्ध गरिने सूचीमा रहेको अर्को चिनियाँ एप टिकटक र अमेरिकी कम्पनी ओरकल अनि वाल्मार्टसँग अमेरिकामा सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको केही समयपछि अदालतको त्यस्तो फैसला आएको हो।
अमेरिका किन वीच्याटमाथि प्रतिबन्ध लगाउन चाहन्छ ?
अमेरिकी वाणिज्यमन्त्रीले एउटा विज्ञप्तिमा उक्त एपमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय चीनद्वारा अमेरिकी नागरिकहरूको "व्यक्तिगत डेटा" सङ्कलनसँग जुझ्नका लागि गरिएको उल्लेख गरेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार वीच्याटले "नेटवर्क गतिविधि, स्थान र ब्राउजिङ तथा सर्च हिस्ट्रीजस्ता विभिन्न किसिमका डेटा" सङ्कलन गर्ने गरेको छ।
मन्त्रालयको शुक्रवारको विज्ञप्तिमा चीनको सत्तारूढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले "राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेशनीति र अमेरिकी अर्थतन्त्रमा खतरा पार्न यी एपहरूको प्रयोग गर्ने माध्यम र अभिप्राय प्रदर्शन गरेको" उल्लेख छ। वीच्याटको सञ्चालक टेन्सेन्टले भने आफ्नो एपमा आदानप्रदान गरिने सन्देश गोप्य रहने बताएको छ।
वीच्याट के हो ?
वीच्याटको स्थापना सन् २०११ मा भएको हो। यसलाई विभिन्न रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रयोगकर्ताहरूले एपबाट कुराकानी गर्नका साथै मोबाइलबाटै भुक्तानी दिन र अन्य स्थानीय सेवा प्रयोग गर्न सक्छन्। चीनमा यसलाई "एप फर एभ्रीथिङ"का रूपमा व्याख्या गरिएको छ र यसका एक अर्बभन्दा बढी मासिक प्रयोगकर्ता छन्।
अन्य चिनियाँ सामाजिक सञ्जालजस्तै वीच्याटले पनि चीन सरकारले गैरकानुनी मान्ने सामग्रीलाई सेन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। मार्च महिनामा प्रकाशित एउटा रिपोर्टमा वीच्याटले ज्यानुअरी १ तारिखबाटै कोरोनाभाइरस महामारीबारे 'कीवर्ड' हरू सेन्सर गरेको उल्लेख गरिएको छ।
तर वीच्याटले भने 'इ्नक्रिप्शन'को अर्थ अरूले कसैको सन्देश 'हेर्न नसक्ने'; शब्द, अडिओ र तस्बिरजस्ता सामग्री आफूहरूको सर्भरमा नबस्ने अनि एक पटक प्रापकले पढिसकेपछि ती सबै सामग्री मेटिने बताएको छ।
आश्विन ५, २०७७ सोमवार १८:३४:१७ बजे : प्रकाशित
# न्यायाधीशद्वारा रोक
काठमाडौँ। क्यानाडाका पूर्व प्रधानमन्त्री जोन टर्नरको निधन भएको छ। ९१ वर्षीय जोन टर्नरको निधन टोरोन्टोमा भएको थियो। क्यानाडाको स्थानीय टेलिभिजनका अनुसार टर्नरले शुक्रवार राति टोरन्टो स्थित आफ्नै निवासमा अन्तिम सास फेरेका हुन्।
उनले सन् १९८४ मा क्यानाडाको १७ औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका थिए। टर्नरको जन्म सन् १९२९ मा इङल्याण्डमा भएको थियो। बाल्यकालमा क्यानाडा बसाइसराइ गरेका टर्नरले सन् १९६२मा लिभरल पार्टीबाट क्यानाडाको राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए ।
उनले सन् १९६८ देखि १९७५ सम्ममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पियरे ट्रूडोको नेतृत्वमा न्याय तथा वित्त मन्त्रीको रुपमा काम गरेका थिए। सन् १९७५ मा अचानक पद छोडेपछि उनी १९८४ सम्म राजनीतिबाट अलग भए। टर्नरले ७९ दिनका लागि मात्र प्रधानमन्त्रीको पद ग्रहण गरेका थिए, जुन क्यानाडाको इतिहासमा दोस्रो छोटो अवधि हो।
आश्विन ५, २०७७ सोमवार १५:५८:०९ बजे : प्रकाशित
# पूर्व प्रधानमन्त्री
# जोन टर्नर
काठमाडौँ। विश्वको धनाड्य व्यक्तिहरुको सूचीको अग्रपंक्तिमा रहने बिल गेट्सले २४ घण्टामा पनि कोरोनाभाइरस परीक्षणको रिपोर्ट पाउन नसक्नु अमेरिकी नागरिकको अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
आज पनि अमेरिकन नागरिकले २४ घण्टामा आफ्नो कोरोना परीक्षणको नतिजा प्राप्त गर्दैनन्, जुन अपमानजनक छ, विश्वका दोस्रो अर्बपति गेट्सले आइतवार फक्स न्यूजसँग भने ।
यसबारे थप उनले भने, ‘जब परीक्षणको पछाडिको प्रविधिको कुरा आउँछ, यसमा कुनै दुई मत छैन कि अमेरिकामा यस्ता प्रविधिहरु अन्य देशहरुको तुलनामा भन्दा ठुलो मात्रामा छ। त्यहिभएर परीक्षणमा ढिला सुस्तीमा कुनै बहानाले पनि काम गर्दैन।’
त्यसैगरी अमेरिकाले समग्र महामारीलाई नियन्त्रण गर्न हामीले अत्यन्त नराम्रो काम गर्यौं जुन संख्याबाट स्पष्ट हुन्छ, गेट्सले बताए।
बिल र मेलिंडा गेट्स फाउन्डेशन कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपको विकास गर्न एक जर्मन बायोटेक कम्पनीलाई समर्थन गर्दै आएको छ। क्युरेभ्याक नामक उक्त खोपलाई जर्मनी र बेल्जियमको सरकारले स्वीकृति पनि दिइसकेको छ। र यसको क्लिनिकल परीक्षण सुरू चाडैं हुने समाचार माध्यम सिएनएनले जनाएको छ।
आश्विन ५, २०७७ सोमवार १५:३८:५३ बजे : प्रकाशित
# कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट
ब्रिटेनको सबैभन्दा ठूलो ब्याङ्क अवैध धन सार्नमा सङ्लग्न भएको खुलासा
बीबीसी। पछिल्लो एउटा खुलासा अनुसार एचएसबीसी ब्याङ्कले घोटालाबारे थाहा पाए पनि ती कार्यमा सङ्लग्न रहेकाहरूलाई विश्वभर लाखौँ डलर पठाउन दिएको उल्लेख गरिएको छ। ब्रिटेनको सबैभन्दा ठूलो ब्याङ्कले सन् २०१३ र २०१४ मा आफ्नो अमेरिकी व्यवसायमार्फत एचएसबीसीको हङ्‍कङस्थित खातामा रकम सारेको थियो।
एचएसबीसीको ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको घोटालाको विस्तृत विवरण ब्याङ्कहरूको "सस्पिसियस एक्टीभीटी रिपोर्टस" अर्थात् सन्दिग्ध गतिविधिबारे दस्ताबेजमा उल्लेख छ। सार्वजनिक भएको उक्त गोप्य दस्तावेजलाई फीनसेन फाइल्स भनिएको छ। एचएसबीसीले भने त्यस्ता गतिविधि बारे जानकारी गराउने विषयमा सधैँ आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको बताएको छ।
अमेरिकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषयमा ब्याङ्कलाई १.९ अर्व अमेरिकी डलर जरिवाना गरिए लगत्तै पछिल्लो घोटालासम्बन्धी गतिविधि सुरु भएको बताइएको छ। ब्याङ्कले यस्ता अभ्यासहरूलाई रोक्ने प्रतिज्ञा गरेको थियो। घोटालामा ठगिएकाहरूका वकिलहरूले त्यस्ता खाता बन्द गर्न ब्याङ्कले समयमै पहल गर्नुपर्ने थियो भनेका छन्।
फिनसेन फाइल्स के हुन?
फिन्सेन फाइल्स २,६५७ दस्तावेजबारे खुलासा हो जसमा २,१०० शङ्कास्पद गतिविधि वा 'सस्पिसियस एक्टीभीटी रिपोर्टस' उल्लेख छ। 'सस्पिसियस एक्टीभीटी रिपोर्टस' आफैमा गलत कार्यको प्रमाण भने होइन। ब्याङ्कहरूले आफ्ना ग्राहकबारे शङ्का गरेको खण्डमा ती दस्तावेज नियमनकारी निकायहरूलाई पठाउने गर्छन्।
कानुन अनुसार उनीहरूले आफ्ना ग्राहक को हुन भन्ने विषयमा जानकार हुनुपर्छ। ब्याङ्कहरूले 'सस्पिसियस एक्टीभीटी रिपोर्टस' पेस गरे भन्दैमा ग्राहकहरूबाट कालो धन लिन भने पाउँदैनन्।
उनीहरूसँग आपराधिक गतिविधिबारे प्रमाण भए रकम कारोबारमा रोक लगाउनुपर्ने हुन्छ। उक्त खुलासाले विश्वका सबैभन्दा ठूला केही ब्याङ्कहरूबाट कसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको थियो र अपराधीहरूले रकम लुकाउन कसरी गुमनाम ब्रिटिस कम्पनीहरूको प्रयोग गरेका थिए भन्ने कुरा देखाएको छ।
ती दस्ताबेज बजफीड् वेबसाइटलाई दिइएको थियो। त्यस्तै खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल 'इन्टरन्याशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट (आईसीआईजे)सँग पनि 'सस्पिसियस एक्टीभीटी रिपोर्टस' बाँढिएको थियो।
आश्विन ५, २०७७ सोमवार १३:४६:४७ बजे : प्रकाशित
भिडिओ बनाउँदै गर्दा कारबाट एक महिला व्यस्त सडकमा खसेपछि...
काठमाडौँ। स्नयापच्याटमा भिडिओ बनाउँदै गर्दा एक महिला व्यस्त सडकमा आफ्नो कारबाट खसेकी छिन्। बेलायतको व्यस्त सडकमा आफ्नो कारको झ्यालबाट निक्लेर स्नयापच्याटमा भिडिओ बनाउँदै गर्दा महिला सडकमा खसेकी त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। लन्डनको दक्षिण मोटरवेमा उक्त महिला सडकमा खसेकी सर्रे प्रहरीले जनाएको छ।
सामाजिक संजाल ट्वीटर मार्फत सर्रे प्रहरीले उक्त घटनाको जानकारी दिएको हो। प्रहरीले महिलाको नाम भने गोप्य राखेको छ। प्रहरीले ट्वीटरमा लेखेको छ, ’ भाग्यवस ति महिलालाई केहि भएन । यस्तो व्यस्त सडकमा उनी लडेर पनि घाइते नहुनमा उनको दिन बलियो रहेछ। ।’
सन् २०११ देखि २०१७ को बीचमा सेल्फी लिँदा विश्वव्यापी करिब २५९ जनाको मृत्यु भएको जर्नल अफ फ्यामिली मेडिसिन एण्ड प्राइमरी केयरमा प्रकाशित एक अध्ययनले देखाएको छ।
अन्वेषकहरूका अनुसार सबैभन्दा बढी सेल्फी लिँदा मृत्यु हुनेमा भारतमा रहेको छ भने रसिया, अमेरिका र पाकिस्तान क्रमशः दोश्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा छन् । सेल्फी लिँदा मृत्यु हुनेमा ३० वर्ष भन्दा कम उमेर भएका ७२ प्रतिशत पुरुषहरू रहेका छन्।
आश्विन ५, २०७७ सोमवार १३:३१:१७ बजे : प्रकाशित
# भिडिओ बनाउँदै गर्दा
# सडकमा खसेपछि
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पविरूद्ध षडयन्त्र, विषाक्त रसायनिक भएको खाम पठाइयो
काठमाडौँ। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन ह्वाइट हाउसको ठेगानामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरूद्ध षडयन्त्र गर्न विषाक्त रसायनिकयुक्त खाम पठाइएको छ। अमेरिकी अनुसन्धान एजेन्सीकाअनुसार केहि दिन यता ह्वाइट हाउस र केही विभागहरुमा रिसिन भनिने खतरनाक विषाक्त रसायन भएको खाम पाठाइएको छ।
यस षड्यन्त्रलाई पुरा गर्न स्थानीय हुलाक प्रणाली प्रयोग भएको ह्वाइट हाउस एक अधिकारीले बताए। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार अनुसन्धान एजेन्सीले उक्त खामहरु क्यानाडाबाट आएको हुनुपर्ने अनुमान गरेका छन्। यसैबीच, यस घटनाको अनुसन्धान गर्दै जाँदा एक महिलालाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ। यद्यपि, महिलाको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
सबै खामहरू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाममा पठाइएको थियो। खामलाई टेक्सासको अन्वेषणको क्रममा पत्ता लागेका हो। ह्वाइट हाउसमा सबै आगमन हुने पत्रहरुलाई राम्ररी जाँच गरि मात्र ह्वाइट हाउसमा पठाइने न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ।
यस विषयमा अनुसन्धानगर्न जोइन्ट टेरोरिजम टास्क फोर्सलाई खटाइएको छ। न्यूयोर्क पुलिसको विशेष इकाईले अनुसन्धान एजेन्सीलाई सहयोग पु¥याउने न्युयोर्क टाइम्स जनाएको छ । यद्यपि, रिसिन सहितका खामहरू कुनै आतंकवादी संगठनसँग नजोडिएको न्यूयोर्क पुलिसका एक अधिकारीले बताए।
आश्विन ५, २०७७ सोमवार १२:२८:४८ बजे : प्रकाशित
# अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प
# विषाक्त रसायनिक